အဖြေရှာပါရစေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » အဖြေရှာပါရစေ
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Nov 19, 2012 in Short Story | 25 comments
ကျွန်တော်ကကမိဘလက်ထပ်ကတည်းကပွဲရုံလုပ်ငန်းတွေအပြင် ကျွန်တော့်လက်ထပ်ကျမှ အစပြုခဲ့သော ITအသုံးအဆောင်များတင်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းကိုပါအောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
“ဦးဘမင်းရဲ့သားအငယ်ကောင်လေးက စီးပွားရေးမှာလည်းအောင်မြင်၊ရုပ်ရည်ကလေးလည်းအဆင်ပြေ၊ပညာ အရည်အချင်းလည်းရှိပြီးသားကို ဘာဖြစ်လို့အ်ိမ်ထောင်ဖက်မရှာသေးတာလဲ”
“ကျုပ်တို့လည်းမနေပါဘူး သင့်တော်တဲ့သမီးလေးတွေတွေ့တိုင်းပြောပါတယ် သားကိုက အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စိတ်မ၀င်စားသလိုလို၊ရှက်သလိုလိုနဲ့ဘာကိုစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်ဖြစ်နေလည်းမသိဘူး။
ကျွန်တော့်ဘ၀ဟာ လိုတာမရ၊ရတာမလို စိတ်ခံစားတိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုမရနိုင်တဲ့ဘ၀မှာ ဘယ်လောက်တောင် ခက်ခဲစွာရပ်တည်နေရတယ်ဆိုတာဘယ်သူုမှသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုဇော်နိုင်ငံခြားသွားတဲ့အခါတိုင်းအောင်အောင်လိုက်ပါရသဖြင့် တစ်ရုံးလုံးက၀န်ထမ်းတွေက အောင်အောင့်ကို အားကျကြသည်။
ဒီကုမ္ပဏီမှာ ကိုဇော့်အတွင်းရေးမှူးသဘောမျိုးနဲ့နေရာရနေခြင်းဟာ အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀ကတည်းက ကိုဇော်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့လို့ပါ။
အလယ်တန်းကျောင်းကတည်းကခင်မင်ရင်းနှီးရုံနဲ့ပညာအရည်မပြည့်မှီ၊လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဆိုတာမရှိတဲ့ အောင်အောင့်ကိုဒီလိုနေရာပေး ထားခြင်းအပေါ်တော်တော်များများကစောင်းပါးရိပ်ခြေတီးတိုးဝေဖန်ကြသလို၊ ကိုဇော့်အပေါ်ပြောရဲဆိုရဲရှိသူတို့ ကတော့ပေါ်တင်မေးမြန်းကြသည်။
“ကျွန်တော့်အတွက်အသုံးတည့်လို့ပေါ့ဗျာ..အောင်အောင်မရှိရင် ကျွန်တော့်အလုပ်လည်းဒီလောက်အောင်မြင် မယ်မထင်ဘူး”
ကိုဇော့်စကားကြောင့်ကြားရသူတွေလက်ဖျားခါရသလို ကိုဇော့်ကိုရှေ့ဆက်နားချဖို့မစွမ်းသာကြ။နောက်ဆုတ် ကုန်ရတာချည့်။ကိုဇော်ကတော့ အောင်အောင့်ကိုနေရာပေးမြဲ။
တကယ်တော့လည်း အတွင်းရေးမှူးလို့ဝိုင်းခေါ်တာခံရတဲ့အောင်အောင်ဟာ ကိုဇော့်အတွက်အကြံပေးခြင်း၊ကူညီ ခြင်းအပိုင်းမှာ သာမန်လက်တိုလက်တောင်းကောင်လေးတစ်ယောက်ထက်မပိုပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိုဇော်ကတော့လူတကာရှေ့မှာ အောင်အောင်သာမရှိရင် သူ့လုပ်ငန်းတွေပဲပျက်ဆီးရတော့မလို၊သူ့ စိတ်မှာစိတ်တိုင်းအကျဆုံးလူဆိုလို့ အောင်အောင်ပဲရှိသလိုလို အမြဲဂုဏ်တင်ပေးတတ်ပါသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သာမန်လူတန်းစား ဆယ်တန်းမအောင်တဲ့အောင်အောင်ဟာ ကိုဇော့်ကျေးဇူးနဲ့လူနေမှုတော့ မြင့်မားလို့နေတာအမှန်ပါ။
ကျွန်တော့်မိဘတွေမှာ သမီး၎ယောက်မွေးပြီးနောက် နောက်ဆုံးသားငယ်တစ်ယောက်သာယောကျာ်းလေးပါ သဖြင့်ထုံးစံအတိုင်းတော်တော်လေး ဂရုစိုက်ကြခဲ့ပါသည်။
အမေက ကျွန်တော့်အတွက်သီးခြားကစားစရာ၊ယောကျာ်းလေးအ၀တ်အစား၊အသုံးအဆောင်တွေဝယ်ပေးပေ မယ့်ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်အထက်က မမလေးရဲ့အသုံးအဆောင် အ၀တ်အစား၊ဖိနပ်လေးတွေကို ၀တ်ရတာသဘောကျတတ်ကြောင်းကျွန်တော်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိပြောပြောနေတတ်ကြသည်။
ကစားစရာဆိုရင်လည်း ကား၊သေနတ်၊စက်ရုပ်တွေထက် အရုပ်မ၊အိုးပုတ်ကလေးတွေနဲ့ကစားရတာပိုနှစ်သက် သည်ဟုဆိုသည်။
အမေတို့ကမကြာခဏအဲဒီလိုတွေပြောပြောနေတတ်သဖြင့် သိတတ်လာတဲ့အရွယ်မှာ ကျွန်တော်ဟာ မိန်းက လေးတွေရဲ့အသုံးအဆောင်တွေကိုလူရှေ့သူရှေ့မှာသုံးစွဲရမှာရှက်သလိုလိုစိတ်ဝင်လာတော့သည်။
အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်တွေ ကျွန်တော့်အခန်းထဲကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်တွေမှာသာ ခိုးဝှက်သုံးစွဲတဲ့အကျင့်တို့စွဲလာတော့သည်။
အဲဒီထက်ဆိုးတာက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အပေါ်စိတ်ဝင်စားရာမှာလည်း အစ်မတွေသဘောကျ၊၀ယ်ယူသိမ်း ဆည်းတတ်တဲ့ မင်းသားတွေရဲ့ပုံတွေကို မင်းသမီးတွေထက်ပိုသဘောကျလာမိသည်။
ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် စတိုးဆိုင်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အရုပ်မလေးတွေ၊ခေါင်းစည်းကလစ်လှလှလေးတွေ၊ ဖိနပ်လှလှလေးတွေတွေ့ရင်လိုချင်စိတ်ကထိန်းမရ။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများအားကျွန်တော်ကလိုက်လျောစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်သဖြင့်ကျွန်တော့်ကို တော်တော်လေးချစ်ကြပါသည်။ကျွန်တော့်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေ အလိုမကျမှုတွေတကယ်ကိုများရတာ ကတော့ကျွန်တော်က သူငယ် ချင်းကောင်လေးတစ်ယောက်အား နူးညံ့ကြင်နာစွာစကားဆိုမိ၊သိုင်းဖက်မိ ပြီဆိုရင်
“ဟေ့ကောင်ငဇော် မင်းကကွာ မိန်းမလိုအိညောင့်အိညောင့်နဲ့ အခြောက်လားကွ”
“အာ ငါ့ကိုအဲလိုကြီးမဖက်နဲ့ကွာ ယားတယ် ကောင်မလေးကျနေတာပဲ”
ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်၏ကြင်နာလိုမှုများကိုသိုဝှက်ထိန်းချုပ်ရင်းနေခဲ့ရသည်။ယောက်ျားပီပီသသမာမာထန်ထန် ဟန်လုပ်နေထိုင်နေပေမယ့် ကျွန်တော့်ရင်မှာ နူးညံ့စရာတွေ့၇င်ယုယချင်၊ကြင်နာချင်စိတ်တွေအလိုလိုဖြစ်ပေါ် နေတတ်သည်။
အောင်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးက ကျွန်တော့်ထက်၂တန်းလောက်ငယ်တဲ့ ၆တန်းကျောင်းသားလေးပါ။
အနေအေးပြီးစာတော်သော ကျော်စွာနဲ့ကျွန်တော်စာအတူ လုပ်ဖြစ်ကြသည်။
ကျော်စွာ့အိမ်မှာစာလုပ်တိုင်းတွေ့နေရတဲ့ ကျော်စွာ့ညီလေးအတွက် မုန့်တွေယူသွား၊ကစားစရာလေးတွေဝယ် ပေးရင်း ခင်မင်မှုပိုခဲ့တာပင်။အောင်အောင်ကအသားဖြူဖြူအရပ်မြင့်မြင့်လေးနှင့် ကျော်စွာ့လိုလူကောင်မညှက်။
အောင်အောင်က ကျွန်တော့်ကာတွန်းစာအုပ်အကြောင်းတွေပြောပြ၊တိရိစ္ဆာန်လေးတွေအကြောင်းပြောပြနဲ့ ကျွန်တော်တို့တော်တော်ချစ်ခင်လာခဲ့သည်။
စီးပွားရေးသိပ်အဆင်မပြေတဲ့ကျော်စွာတို့အိမ်မှာ TV မရှိချေ။ထို့ကြောင့် အောင်အောင်လေးက TVကြည့်ခြင်း ကိုအထူးမက်မောသည်။
“ကိုဇော် ကျောင်းပိတ်ရက်ကိုဇော်တို့အိမ်မှာ ကာတွန်းကားလာကြည့်ချင်တယ်ဗျာ ရမလား”
“ရပါတယ်အန်တီ သားနဲ့လိုက်ပေးအိပ်လိုက်ပါလား ညဘက်အတူကြည့်တာပေါ့”
သောကြာနေ့ည ကျော်စွာနဲ့အိမ်စာတွေအတူလုပ်ပြီးသည်နှင့်အောင်အောင်လေးကိုကျွန်တော်နဲ့ခေါ်လာပြီး ညတစ်ဝက်လောက်နီးပါး အောင်အောင်ကြည့်ချင်တဲ့အခွေတွေထိုင်ကြည့်ကြသည်။
အိမ်ကလူတွေကမဆူပါ။ကျွန်တော်လိုမဆိုးသွမ်းတဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားရဲ့အလိုကိုအတော်ပင်လိုက်ကြ ရှာသည်။အောင်အောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်စားဖို့မုန့်တွေလုပ်ပေးကြပြီး စောစောအိပ်ရာဝင်ကုန်ကြတာပင်။
မနက်၂နာရီလောက်မှ ကျွန်တော်တို့အတူကျွန်တော့်အခန်းထဲမှာ အိပ်ကြသည်။
၂ခါလောက်ဖြေပြီးမအောင်တာနဲ့အပြင်ဖြေဖြေရင်း တဖက်ကအလုပ်ရှာသလိုလို၊ယောင်လည်လည်နှင့်ဖြစ်နေ ရှာသည်။
အောင်အောင်နှင့်အဲဒီလိုတရင်းတနှီးနေရတိုင်းကျွန်တော့်ရင်မှာအတိုင်းမသိ။အောင်အောင်နဲ့ရက်ကြာကြာမတွေ့ ရတဲ့အခါတွေမှာ တစ်ခုခုလိုအပ်နေသလို စိတ်တွေလေးလံနေတတ်သည်။
“သားနိုင်အောင်လုပ်မှာပါဖေဖေ အခုတည်းကအစပျိုးထားမှ သားကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်ဆို ကောင်းကောင်းလည်ပတ်နေမှာပေါ့”
“ကဲပါလေ သားသဘော သားအစပျိုးချင်ရင်လည်းစီစဉ်လေ ကျောင်းစာကိုတော့မထိခိုက်စေချင်ဘူး”
ဒီလိုနဲ့ ဆယ်တန်းမအောင်နိုင်ပဲယောင်နေတဲ့အောင်အောင်တစ်ယောက်ကို ကျွန်တော့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲ သွင်းထားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော့်မျက်စိအောက်ကမပျောက်စေတော့။
“မင်းနဲ့ကိုဇော်ထက်နိုင်ကဘာလဲကွ နိုင်ငံခြားမှာလို လိင်တူလင်မယားလား”
သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့လှမြင့်တို့ကစလိုက်တာဆိုပေမယ့် အောင်အောင်တစ်ယောက်မျက်နှာတွေရဲတက်လာကာ စိတ်ကထောင်းခနဲဖြစ်သွားတော့သည်။
“ဟေ့ရောင်တွေ မင်းတို့ပါးစပ်တွေသရမ်းလှချည်လားကွ မင်းတို့မျက်စိထဲ ငါကကနွဲ့ကလျပုံဖြစ်နေလို့လား”
“သိဘူးလေကွာ မင်းတို့နှစ်ယောက်က တွဲလိုက်တာမှလွန်ရော တစ်အိပ်ယာထဲအတူအိပ်လားအိပ်ရဲ့”
“ဒါကတော့ ကိုဇော်နဲ့ငါကအခုမှတွဲလာတဲ့လူတွေလားကွာ မင်းတို့နှစ်ကောင်ကောအတူမအိပ်ဖူးဘူးလား”
“ဒါများ နောက်အဲလိုမနောက်နဲ့ သူများတွေကြားရင်အဟုတ်ထင်ပြီး ကိုဇော်သိက္ခာကျတယ်”
အရင်ကတစ်ခါမှဒီလိုမြင်ကြလိမ့်မယ်လိုမတွေးဖူးပေမယ့် ပြည်ပနိုင်ငံတွေကလိင်တူလက်ထက်မှုသတင်းတွေ က အင်တာနက်ကျေးဇူးတွေကြောင့်မြန်မာတွေကို မတွေးဖူးတာတွေတွေးမိကုန်စေနေပြီ။
အောင်အောင် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတစ်ခါမှမထိတ်လန့်ဖူးပေ။ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်နိုင်ငံရောက် ရောက် ကိုဇော်ကအခန်းတစ်ခုတည်းယူတတ်ပြီး သူနဲ့သာအတူအိပ်သည်။
အခုရက်ပိုင်းရှောင်ဖယ်ဖယ်လုပ်နေသော အောင်အောင့်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော် စိတ်မချမ်းမြေ့။
“အောင်အောင်ရေ ညစာမစားပဲ လှည်းတန်းမှာ ငါးကင်သွားစားမလားကွ”
“ဟုတ်လား ဒါဖြင့် ဆေးခန်းသွားပြမလား လာလေကွာ”
အရင်ဆို ကျွန်တော့်ထက်အရင်အလုပ်ဆင်းလေ့မရှိသောအောင်အောင် ကျွန်တော့်စကားကိုမငြင်းဆန်ပဲ ချက်ချင်းတကယ်ပြန်သွားသည်။
ကျော်စွာ့စကားကြောင့် ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်အောင့်သွားသည်။ကျော်စွာနဲ့တစ်နာရီလောက်အောင့်အီးပြီး စကားထိုင်ပြောရင်းအောင်အောင့်ကိုမျှော်နေမိသော်လည်းအချည်းအနှီးသာ။
အပြန်လမ်းမှာ အောင်အောင့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုတစ်နေ့တည်းနဲ့သိသိသာသာမြင်လိုက်ရသလို တွေးတော စိတ်မောနေမိတော့သည်။
အောင်အောင့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကို ၃ပတ်တိုင်တိုင်အောင့်အီးသီးခံစောင့်ကြည့်နေပြီးအခြေအနေကဆိုးသည် ထက်ဆိုးလာတာမို့ အောင်အောင်စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် မသွားလျှင်လည်းဖြစ်တဲ့ မလေးရှားက ကုန်စည်ပြပွဲတစ်ခုသို့အလုပ်အကြောင်းပြကာသွားဖို့စီစဉ်မိတာပါ။
အားလုံးစီစဉ်ပြီးမှမနက်ဖြန်ထွက်ရန်အောင်အောင့်ကိုအသိပေးလိုက်စဉ်မှာ အခုလို ကြားလိုက်ရတာ။
တုန်ယင်လှုပ်ရှားနေသောကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကိုအနိုင်နိုင်ထိန်းရင်း အောင်အောင်ဘာတွေခံစားနေရသလဲဆို တာနားလည်စပြုလာပြီ။
အောင်အောင်ကဲ့သို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဂယက်ရိုက်မှုကို့ ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ဖူးတာ အောင်အောင့်ထက်ကာလများစွာ စောခဲ့ပါသည်။
သုိ့ပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ကျွန်တော် အောင်အောင့်ကိုဘေးနားမှာမခွာတမ်းထားခဲ့မိတာပင်။
ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်သုံးသပ်ခဲ့ဖူးပေမယ့်အဖြေကတစ်ခုတည်းသာထွက်နေတော့ ကျွန်တော့်စိတ် ကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ရန်မကြိုးစားတော့။
အောင်အောင်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ပတ်သတ်မှုကိုပြောင်းလဲပြစ်ရန်ကြိုးစားနေချေပြီ ဟု
“ကောင်းပြီလေအောင်အောင် ဘာကြောင့်ဆိုတာ ကိုဇော်မမေးတော့ဘူး ငါ့ညီနားပါ ကိုဇော်ပြန်လာတဲ့အခါ အဖြေတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားထားပေါ့ကွာ ကိုဇော့်ကိုနားလည်တယ်မို့လား”
အောင်အောင်က ဖန်တုံးကိုပင်တွေဝေစွငေးရင်း ခေါင်းသာညိတ်ပြချေသည်။
ရုံးကိုပုံမှန်တက်ပြီး ကိုဇော်တာဝန်မပေးခဲ့တဲ့ ဆိုင်တွေကိုလိုက်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့တခြားကိစ္စတွေကိုကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ကိုင်နေရပေမယ့် ကိုဇော့်စားပွဲသို့မျက်လုံးရောက်တိုင်းဝမ်းနည်းနေမိသည်။
ကိုဇော်ပြောခဲ့သလို အောင်အောင်ကြိုးစားအဖြေရှာခဲ့တာ ကိုဇော့်ကိုရှောင်ဖယ်နေတဲ့ ၃ပတ်လုံးမှာပါပဲ။
ကိုဇော့်ကိုရှောင်ဖယ်နေမိတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးဘယ်လိုမှစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုမရပေမယ့် အခုပြတ်သားမှ နောက်အရေးအဆင်ပြေရမည်မို့လား။
အောင်အောင်တို့လိုနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘယ်လိုမှမအပ်စပ်တဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ အောင်အောင်နဲ့ကိုဇော်ရဲ့စိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေရမှာလား။
တိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့ကိုဇော့်လိုလူတစ်ယောက်ကို အများတံတွေးခွက်မှာမျောပါပြီး သိက္ခာကျစေခြင်းဖြင့် အောင်အောင်တို့သာယာစေရတော့မလား။
မဖြစ်ပါ။ကိုဇော့်အပေါ်အောင်အောင်ရဲ့ချစ်ခင်မှုအတိုင်းအတာဟာ ကိုဇော့်ထက်မပိုနိုင်ပေမယ့် ကိုဇော့်ဘ၀ကို နည်းနည်းမှမထိခိုက်စေလို။
ယောကျာ်းချင်းဆိုပြီးမျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ကော ဘယ်အချိန်အတိုင်းအတာထိအခုလို ရစ်ရစ်ထွေးထွေးနေနိုင် ကြမလဲ။
ကိုဇော်နဲ့အတူလုပ်နေကြအလုပ်အားလုံးပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့အပြီး ကိုဇော့်စားပွဲပေါ်စာအိတ်လေးတစ် အိတ်တင်ကာ အောင်အောင်တစ်ယောက် ကိုဇော်နဲ့ဝေးရာကိုထွက်ခဲ့ချေပြီ။
မုံရွာမှထွက်ခွာလာသော ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်လို့အောင်အောင့်ကိုမတွေ့လျှင် ဖြစ်သွားမည့်ကိုဇော့်ခံစားချက်ကိုတွေးကာ အောင်အောင့်ရင်ထဲအောင့်နေမိတာအမှန်ပါ။
ရေရှည်ကောင်းဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုပ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုသန့်ရှင်းသွားအောင် ဝေးကွာခြင်းနဲ့ဆေးကြော လိုက်ကြစို့ကိုဇော်………
အမလေး ဖတ်ရတာ မဆိုးပေမယ့် တကယ့်ကို ကျောင်းဆရာဂျီးပါလားနော်။
ဟင့်အင်း လို့ ငြင်းမယ်ကိုယ့်လူ
မနန်းတော်ရာသူရေ…..ရသ ပိုစ့်တွေ ဖတ်၇လို့ အားပေးနေပါတယ်။ဆက်ရေးပါ။ :hee:
အဖြေရှာတာက ဟို..အမူးသမား ကိုအောင်ပုတို့ အဖွဲ့ နဲ့သာသက်ဆိုင်တော့ သူတို့ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်တွေ ဘယ်လိုသုံးသပ် ဆုံးဖြတ်လဲ ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
ဒါကြောင့် ကျနော်တော့ အဖြေကို မရှာတော့ဘူး..။
ကြုံတောင့် ကြုံခဲ ဇတ်လမ်းလေးပါပဲ ….
အဖြေမရှာတော့ဘူး ….။ အပြင်မှာလည်း ဒီလိုခတ်ဆင်ဆင်တွေတွေ့ ခဲ့ ပါတယ် …။
အပြင်မှာ တွေ့ဖူးပါတယ်ဗျာ။ ရုပ်ရှင်တွေလည်း ကြည့်ဖူးပါရဲ့။
ဒီစာကတော့ဖြင့် ရေးသူက နိုင်နိုင်နင်းနင်းရေးသွားလို့ ဇာတ်လမ်းက ယဉ်ယဉ်လေးဖြစ်သွားပါတယ်။ အားပေးပါတယ်။ ဆက်ရေးပါ။ :hee:
နောက်ဆို ဘာက အစစ်/အတု ခွဲရခက်မဲ့ အချိန်ကို ရောက်လာတော့မယ်ထင်ပါတယ်။
သွားလေသူ အော်စကာဆုရှင်လေးကို သတိရသွားမိပေါ့။
အဲ့ဒီ ကားထက်ဆိုးတဲ့ ကိုရီးယား နန်းတွင်းကားရှိပါ၏။ ကြိုက်မိသမျှမင်းသားတွေ အဲလို ကားမျိုးရိုက်အပြီးမှာ စိတ်ကုန်သွားပါသည်။
frozen flower ဆိုတဲ့ ကားများလား မခိုင်ဇာရေ..
အဲဒီကားကတော့ ကြမ်းသားဗျ..။ ကိုရီးယား မင်းသား
များ အဲဒီလို ရိုက်ဝံ့တာ နည်းနည်းတော့ အံ့သြမိတယ်။
ကျနော် အဲကားကြည့်ပြီး အဲ့ မင်းသားနှစ်ယောက်နဲ့ အဆက်ဖြတ်လိုက်တာ ဒီနေ့ထိပါပဲ။
(ဟီး၊ လူတကာကို လည်း မကြည့်ပါနဲ့လို့ သတိလိုက်ပေးပါသေးတယ်။)
Brokeback Mountain ထက်ဆိုးလို့ပါ။
ဘရုတ်ဘယက် မောင်တိန် ကိုကြိုက်တာ ..
ဒါရိုက်တာ အန်းလီရဲ့ အနုပညာကို ကြိုက်တာပါဗျာ..
အဲ့ကားပီး ထပ်ရိုက်တဲ့ လာ့စ် ကောရှင်း ဆို ..
အစ်မ မကြည့်ဘူးသေးဘူး။ အဲလို ကားမျိုးဆို ပြောနဲ့တော့။ ညည်းကို ကြောက်သဟဲ့။ တကယ်လား၊ နောက်သလား မသိ။
အစ်မခိုင်ဇာပြောတဲ့ကိုးရီးယားနန်းတွင်းကားက Frozen Flower လား ကျွန်မလည်းကြည့်ဖူးတယ်။
ပို့စ်လေးကို အရသာရှိရှိ ဖတ်သွားရပါတယ်….
အဖြေရှာ မရတဲ့ ဝေဒနာ တစ်ရပ်ကိုလည်း ခံစားမိသွားပါတယ်….
ခွန်းဆင့်နေခြည် ရဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို သွားသတိရမိပါတယ် နန်းတော်ရာသူရေ…။
သီချင်းနာမည်လေးက လက်ဆောင် တဲ့…။
ခွန်းဆင့်နေခြည်ဆိုထားတဲ့ စီးရီး တွေထဲမှာတော့ အဲဒီသီချင်းက
ခွန်းဆင့်နေခြည်ဆိုထားတယ်လို့ မထင်ရလောက်အောင် ကောင်းလွန်းပါတယ်ဗျာ…။
အော် ကိုယ်ကလည်းအဲဒီသီချင်းကို ကြိုက်နေမိတော့ မိန်းမရှာစာရင်းများဝင်သွားမလားမသိ…။
ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးဝေး ဘယ်လောက်ပဲနီးနီး စိတ်ကမောင့်ရဲ့အနားမှာ
ကျုပ်သိတဲ့ ကခြော်တကောက်တွေကတော့ အပျော်ဖောက်သွားတာများလို့ ဦးကြောင်ရင်ထဲ အသဲဇကာပေါက် ဖြစ်နေပြီကောကွယ်..။ အခုလည်း စီတုံးဂေး သတိရတယ် ရတယ်နဲ့ မိုက်ကယ်အောင်ပု ပေါင်ကြားထဲ ရောက်နေပြီ…။ အာဆီယံပွဲအတွက် နပန်းသတ် လေ့ကျင့်နေခြင်းဖြစ်သည်… ။ :buu:
ဖြိုးရှိသေးတယ်လေ ဦးကြောင် စိတ်မပူပါနဲ့
နန်းသူရေး သလို အတွဲမျိုးကို မြင်ဖူးတယ်။ အဒေါ်အိမ်ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ နေကြတာ။ သူတို့ကတော့ ပန်းတိမ်ဖိုထောင်ထားကြတာ ။ မခွဲ တတွဲတွဲပဲ ။ နောက်တော့ ဘာကြောင့်လည်း မသိဘူး တယောက်က မိန်းမယူသွားတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ် မခံနိုင်တာလည်း ပါမှာပေါ့လေ။ သူတို့က ကျတော မနွဲ့ဘူး ဒါပေမဲ့ ကြည့်ရတာ တမျိုးပဲ ။
ဘယ်လောက်ပဲတိုးတက်ပွင့်လင်းပါစေ လိင်တူချင်းဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ
ခံစားလို့မရတဲ့ သဘာဝကိုဆန့်ကျင်မှုတစ်ရပ်လို့သာမြင်ကြောင်း …….
မောင်ပေ နဲ့ စိန်ဗိုက်ဗိုက် တို့ရဲ့
ကိုဘလက်ချော ရေ ပြသနာပဲ ၊ ကျွန်တော်လဲ အဲဒီသီချင်းကြိုက်တယ် ၊ ခြောက်တော့ မခြောက်ပါ။
မနန်းတော်ရာသူဇာတ်လမ်းလေးက အဆုံးထိဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးမိန်းကလေးချင်းအချစ်တော်ဇာတ်လမ်းမျိုး အနှစ် ၂၀ကျော်လောက်ရှိပြီး လက်တွဲနေတာတွေ့ဖူးတယ်။ အခုအချိန်ထိပဲပေါ့နော်. သူတို့လည်း အစ်မဇာတ်လမ်းထဲကလိုပဲထင်ပါတယ်… သူတို့ မွမ်းမံသင်တန်းတခု မှာ တစ်လလောက်အချိန်ကလေးသိကျွမ်းပြီး အခုထိ ဆေးပင်စင်တွေယူပြီးသည်အထိတွဲနေကြတာလေ..